Moya Malunga Nathi- Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Co., Ltd.
Ifowuni: + 86-571-87816901
I-Lateral Flow Immunoassay
Lungiselela i-Tube Medium
I-Hangzhou Genesis Biodetection kunye ne-Biocontrol Co., Ltd. (GENESIS), Esekwe kwi-2002, njengomvelisi we-in-vitro diagnostic device, ikhethekileyo kuphando, ukuphuhliswa kunye nokuveliswa kweekiti zokuvavanya ngokukhawuleza, kunye neekiti ze-POCT kunye nezixhobo ezifanelekileyo. Iqela le-R&D le-GENESIS likhokelwa ngoolwandle olubuyileyo izazinzulu zaseTshayina kunye nezazinzulu zase-United States naseJapan, ezinemvelaphi eyomeleleyo kunye namava kwiinkalo ezininzi ezibandakanya i-microbiology, i-immunology kunye ne-molecular biology.
Inkampani iye yaphuhlisa uluhlu lwezixhobo zokuvavanya ngokukhawuleza kunye neekiti ze-POCT zokukhangela ngokukhawuleza iintsholongwane kwintsholongwane yokuphefumula kunye ne-gastro-infection, kuquka i-Influenza A, B, i-Respiratory Adeno Virus, i-Respiratory Syncytial Virus, i-Mycoplasma Pneumoniae, i-Norovirus, i-Rotavirus, njl. Uninzi lweemveliso mhlawumbi yeyodwa okanye yeyokuqala eklasini eTshayina.Ke ngoko, iGenesis ibe yinkokeli yentengiso kuvavanyo olukhawulezayo lwe-pathogen yephecana lokuphefumla kunye ne-digestive tract pathogen iminyaka e-China.
Ngaphezu koko, ngenxa yokusebenza okuphezulu kunye nomgangatho weemveliso zeGENESIS, iimveliso ziye zaqondwa kakuhle kwimarike yaphesheya kubandakanya iJapan, iYurophu kunye namazwe aseAsia.
Isibhedlele esidityanisiweyo kwiYunivesithi yaseZhejiang
◼ Ph.D Biochemistry evela kwiYunivesithi yaseKyoto, eJapan
◼ I-P&G ye-R&D yeminyaka eli-10 yokhathalelo lwempilo kunye namacandelo okhathalelo lwesikhumba
> 100 amaphepha ophando lweNzululwazi
>30 kwiijenali zamazwe ngamazwe ezikumgangatho ophezulu ezineMpembelelo yeMpembelelo>3
Enkosi ngokundwendwela iwebhusayithi ye-GENESIS!
Njengomvelisi ohamba phambili kwishishini le-IVD, i-GENESIS izinikele kwaye ikhethekileyo kwi-R & D, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nokuthengisa i-reagents yokuxilonga ngokukhawuleza kunye nezixhobo zokuvavanya, i-microbiology reagents kunye nezinye iimveliso ezifanelekileyo, kunye nenkonzo ehlukeneyo njenge-OEM, i-ODM, i-Technology Transfer kunye. intsebenziswano njl kubathengi bethu.Ukusebenzisana nenkampani yethu yokubumba kunye neplastiki, i-GENESIS iyakwazi ukwenza i-OEM & ODM uyilo lweemveliso zeplastiki ezilahlwayo kunye nokulawula ukuveliswa kwevolumu ngesicelo somthengi.
I-GENESIS iye yavelisa uluhlu lweemveliso ze-in-vitro zokuxilonga ngokukhawuleza ezisekelwe kwi-antigen yokubona i-pathogen equka i-M. pneumoniae, i-Influenza A / B, i-Adenovirus (zombini ukuphefumula kunye ne-gastro), i-Respiratory Syncytial Virus, i-Noro virus, i-Rota Virus, i-H. pyroli , I-Tuberclosis, i-Strptococcus A, kunye ne-Dengue njl. I-Mycobacterium Tuberculosis Identification kit (ukufumanisa i-protein ye-secretion MBP64) kunye ne-Mycoplasma Pneumoinaze Antigen Test Kit zimbini "nye kuphela".iimveliso ezikhoyo eTshayina.
Kwinqanaba lokuqala lobhubhani we-COVID-19, iGenesis yayiyenye yeenkampani ezimbalwa eziye zaphuhlisa ngokukhawuleza izixhobo zokuxilonga intsholongwane.Ngoku, iGenesis inothotho lweemveliso ze-COVID-19 ezigqumayo ukusuka kwisixhobo sokuqokelela iisampulu (VTM, abaqokeleli amathe, iiswabs), izixhobo zovavanyo lwe-antibody (i-antibodies ngokuchasene ne-S protein kunye ne-N protein) kunye nezixhobo zovavanyo lwe-antigen.
Izixhobo zethu zokuvelisa ziyilwe zaza zakhiwa ngokulandela izikhokelo ze-Japan Health Warefare & Labour Ministry, China Good Manufacturing Practice (GMP) kunye ne-US Food & Drug Administration (FDA), ukuze kuqinisekiswe imveliso yomgangatho ophezulu kunye nokuzinza.I-GENESIS yaseka umgca wokwenziwa kwe-aseptic phantsi kobushushu obulawulwayo kunye nokufuma kwemekobume ngokusetyenziswa kwetekhnoloji yezixhobo zokuvelisa ezizenzekelayo.
Ngenkolelo "yokubonelela abathengi ngesona sisombululo sikhawulezayo, esichanekileyo, esona silula kunye nesipheleleyo", iGENESIS ikwaphuhlise uthotho lwezixhobo zokuvavanya iimolekyuli kunye ne-immunological kunye nemithombo yeendaba elungiselelwe kwangaphambili ye-microbiology kunye nezinye iimveliso kwiindawo ezifanelekileyo.
"Ukuthembeka kunye nokuThembeka, uMgangatho oPhezulu kunye nokuSebenza, uJoliso kuMthengi", lixabiso lethu eliphambili.Sikholelwa ukuba iGENESIS iya kuba nekamva eliqaqambileyo kunye nempumelelo.Siya kuzingisa, sizikhuthaze kwaye singaze silahle iinkolelo zethu xa sijongene nobunzima ukuze sifezekise injongo yethu efanayo.
Enkosi kubo bonke bahlobo ngenkxaso yenu.
NgoNovemba 2017, iqela lekholomu ye-CCTV5 "Chess kunye neCard Music" enomxholo othi "Chess ehlabathini, i-chess engapheliyo" yafika kwiZhejiang "Idolophu yaseYu Shun" -Shangyu, Shaoxing.Ilifa lenkcubeko likaShangyu liyaphumelela, kwaye linobudlelwane obunzulu bembali kunye neGo ukusukela kumaxesha amandulo.Ngexesha le-Eastern Jin Dynasty celebrity u-Xie An wayehlala e-Shangyu Dongshan, wayenencoko nabantu abaninzi abadumileyo kwaye wadlulisela njengebali elimnandi.
Kangangeminyaka emininzi, uShaoxing Shangyu uzibophelele ekuvakaliseni nasekukhuthazeni uHamba lwabantwana, kwaye wathatha ithuba lokufaka isicelo ngempumelelo kwi "Hometown of Go" ukuze aqhubele phambili ngcono inkcubeko yemveli.Umphathi wethu jikelele u-Chen Gongxiang wamkele udliwano-ndlebe neCCTV.Njengomongameli we-Shangyu District Go Association, uye wanceda "Hamba iNtlalontle yoLuntu" iminyaka emininzi.Ngemizamo engapheliyo kunye nokunyamezela, iitumente ezinkulu zeGo yesizwe ziye zabanjwa ngempumelelo eShangyu.Ikhuthaze uphuhliso lomdlalo we-Shangyu Go, kwaye yongeza amandla ukuze izuze ilifa ubuncwane benkcubeko yamaTshayina, ikhuthaze isimbo esitsha samaxesha, kwaye ikhuthaze imfundo esemgangathweni.
IHangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Co., Ltd.
Umnxeba: + 86-571-87816901